Xogtii Ugu Dambaysay Ee Heshiiska Ay Man United Ku Doonayso Sergio Reguilon, Go'aanka Ciyaaryahanka & Aragtida Real Madrid - Gool24.Net
Xogtii Ugu Dambaysay Ee Heshiiska Ay Man United Ku Doonayso Sergio Reguilon, Go’aanka Ciyaaryahanka & Aragtida Real Madrid
September 14, 2020 Apdihakem Omer Adam
Kooxda Manchester United oo aan dhaq-dhaqaaqii ay taageerayaasheedu ka filayeen wali suuqa ka samayn ayaa lala xidhiidhinayaa daafaca bidix ee Real Madrid ee Sergio Reguilon oo xilli ciyaareed amaah ah kusoo joogay Sevilla.
Reguilon ayaa xilli ciyaareed qurux badan lasoo qaatay kooxda Sevilla oo uu ugu dambayn kula soo guuleystay UEFA Europe League iyadoo loosoo doortay daafacii bidix ee ugu wanaagsanaa La Liga 2019-20.
Reguilon ayaa xiiso ka helaya Man United si lamid ah kooxdii uu soo joogay sanadkii hore ee Sevilla maadaama oo uusan qayb ka ahayn qorshaha tababare Zinadine Zidane oo booskiisa u haysta Ferland Mendy iyo Marcelo Vieira.
Haddaba, sida uu hadda sheegayo saxafi Fabrizio Romano, Manchester United ayaa isha ku haysa inay maalmaha soo socda dhexdooda u dhaqaaqdo saxeexa Reguilon laakiin aysan doonayn inay bixiyaan lacagta 30-ka Milyan ee euro ah ee ay Real doonayso.
Real Madrid ayaa qabta aragti ah in heshiiska lagu daro qoddob ogolaanaya inay mustaqbalka dib ula wareegi karaan Reguilon taas oo noqon karta arrinta gabi ahaanba tartanka ka saari karta Red Devils.
Romano ayaa intaas ku daraya in aysan wax dhib ahi ku jirin in Man United iyo Reguilon ay ku heshiiyaan heshiiska shaqsiga ah iyo mushaharaadka xiddiga maadaama oo uu sheegay in go’aanka Reguilon qudhiisu uu yahay inuu doonayo ku biirista Man United.
Ugu dambayn, saxafiga ree Talyaani ayaa sidoo kale xusaya in Manchester ay hadda kali ku tahay doonista 23 sano jirka daafaca bidix maadaama Sevilla ay loolanka ka baxday.